Izinhlobo zezingoma zamadoda | Amadoda aSitayela
Izinhlobo zezingoma zamadoda
U-Alicia tomero | | Ukunakekelwa komuntu siqu, Izitayela zezinwele, Amathrendi
Ama-bangs emadodeni asekhona futhi kuyimpoqo ebalulekile kubantu abaningi ngalolo thinta olukhethekile nolwehlukile, ukumboza uhlobo oluthile lokungapheleli noma ukuthinta ibhalansi ezingxenyeni ezibanzi.
Thola izinwele nezinwele Kungakumangaza, ngoba ingabandisa ubuso bakho, uzungeze izici zakho ezilula kakhulu noma ufihle noma iyiphi into eyingqayizivele. Ngaphandle kokungabaza, izitayela zezinwele ezimfushane yizo ezinikeza ama-bangs akhanga kakhulu, anikeza lokho kubukeka kupholile futhi kupholile kakhulu.
1 Izinhlobo zama-bangs kuye ngobuso
2 Izinhlobo zama-bangs
2.1 Ama-bangs amade, ama-angular
2.2 Ama-bangs aqondile ngezinwele eziningi
2.3 Ama-bangs amafushane afushanisiwe
2.4 Ama-bangs asontekile
2.5 Ukugcinwa kwe-Bangs
Izinhlobo zama-bangs kuye ngobuso
Siyazibonela mathupha ukuthi akuzona zonke izinwele ezigudlisayo futhi ngaphezulu, ngaphandle kokungabaza, uma sizosishiya ngama-bangs. Ubuso obuyindilinga ayidingi ukuqhuma okuqondile, ngoba umphumela usazoba namandla kakhulu. Umqondo omuhle ukugqashula lokho kufanelana ukumaka eceleni. Ama-bangs afanele amadoda anobuso obude kusukela lapho kunciphisa ubude bazo.
Ubuso obuyisikwele imvamisa zinemihlathi evelele kakhulu. Ukugqashuka ngokubizwa kwalowo mhlathi, ungabheja ngesitayela sezinwele se-hipster, nge izinwele ezinde kakhulu ngaphezulu ngama-bangs afiphele ebusweni. Ama-bangs awabukeki kahle kulolu hlobo lobuso njengoba efushanisa ubude bawo.
Ungazitayela kanjani izinwele ezifushane ezifakiwe
Ngobuso obusaqanda singeluleka izinhlobo eziningi zezinwele futhi ngenhlanhla yamukela zonke izinhlobo zemibhobho. Okufanayo kwenzeka ngezinhlobo zentshebe, cishe zonke izinhlobo zamukelwa.
Ukuqhuma kwamadoda kubuyele emuva ukuhlala. Basetha umkhuba wabo ngo-2016 futhi iphinda ibuyiselwe kuleso sici esiyinkimbinkimbi esithola ukudala isithombe esinikeza ubusha nokuhamba. Izinhlobo noma amakilasi abo ahluke kakhulu, ukuhlanganisa izinwele ezingezinde kakhulu nama-bangs kufanele uzinike ivolumu. Khonza i Ukusikeka kwe-gradient ngokusikeka kwe-angled. Yize i- ukusikeka okubushelelezi nokuqondile, konke kuzoya ngohlobo lokugunda izinwele oluhlanganiswe nalo.
Inhloso yokuthola ama-bangs aphelele ukuthi usuvele uyalazi uhlobo olufunayo, thola umfanekiso wesithombe ngasinye futhi wazi ukuthi yiwona ozokufanela kahle uhlobo lwakho lobuso. Umlungisi wezinwele uzoba nesibopho Ukuvumelanisa lokho kusika okufunayo, kuzokwenza ama-curls akho awe kancane ebusweni bakho. Uma unezinwele eziqondile, zizoba ngama-angled, zingakuphi? iqonde noma ishanelwe eceleni. Kubalulekile ukuba sezandleni zochwepheshe ukuze azi ukuthi angawahlanganisa kanjani ama-bangs nezinhlangothi zobuso.
Ama-bangs amade, ama-angular
Yinde futhi ifinyelela ebunzini lonke nengxenye yamashiya. Ukuma kwayo kungaqondile noma ngokusika okungaphathwa kolunye uhlangothi lobuso. Lokhu kusikwa kuklanyelwe nokuthi uma ufuna ukudonsa izinwele zakho ubuyele emuva futhi ngokungangabazeki kungenye yezinsizwa ezithandwa kakhulu nezabafana abanesibindi.
Ama-bangs aqondile ngezinwele eziningi
Lolu hlobo lokusika kumele lube nalo ukusika okuqinile futhi okuphelele. Izandla zochwepheshe zingakusiza ukuthi uthole le mphetho. Ezimweni eziningi, izinwele eziningi ziyadingeka ukuze zinikezwe ukuthungwa nokuqina. Ubude bezinwele bungakhethwa noma bube bude ngokwedlulele noma bufushane.
Ama-bangs amafushane afushanisiwe
Lolu hlobo lwama-bangs lufushane futhi lukwenza ube nesibindi sokuwugqoka ngenxa yobude bawo obufushane. Bangama-trendsetter, bobabili ezinwele ezisontekile futhi ezinweleni ezingcolile nezibushelelezi. Inhloso yawo ukuthi ihlanzeke ngokuphelele, kepha ngokuthintwa okumbalwa kokunakekelwa, kufanele kubonakale sengathi kunjalo ahlelwe futhi emise ngokwemvelo.
Lolu hlobo lokusika alunakutholakalela amadoda anezinwele ezisontekile. Lesi sici ngokuvamile sishiyelwa ku- Ukusika okungaphansi nokusimanjemanje, Izinhlangothi zekhanda zigundiwe kakhulu futhi indawo engenhla yinde impela. Zonke izinwele izoshaya phambili, ebunzini ngokuwa kwemvelo, ngama-curls amaningi noma ambalwa. Okungcono, shiya ukubukeka okudala ukunyakaza.
Lapho sesikulungele ukusika kufanele sazi ukuthi singakubonisa kanjani ngalokho ukubukeka okusha nokusha. Uma ufuna ukusebenzisa i-fixative indlela engcono yokukwenza nge umkhiqizo onomphumela we-matte. I-wax yezinwele ingenye yezinzuzo, ngoba iwuphawu futhi ungakhetha ukuba nomphumela omncane omanzi. Kusala kuphela ukuyigcina ezingeni elifanayo nayo ukusika okuncane kanye ngenyanga, ngoba kule ndawo kukhula ukukhula kwayo.
Lapho ukhetha isitayela sezinwele futhi ikakhulukazi ngama-bangs, kufanele hlonipha isimo semvelo sezinwele. Ungaziphoqeleli izinwele noma uvumele umphathi wezinwele ukuthi akhiqize ubujamo ongeke ukwazi ukukufeza kamuva lapho uqala ukugeza. Uma udinga ukwazi eminye imibono ungasifunda esigabeni sethu "ukugundwa kwezinwele ngama-bangs".
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izinhlobo zezingoma zamadoda
Ayyy ngiyathanda ukuthi abantu besilisa basebenzisa ukubukeka okusha nsuku zonke ukuze babukeke bebahle kakhulu futhi abazizwa sengathi bangamadoda amancane ngokukwenza, isoka lami lithanda ukwenza izinwele zezinwele, ukubukeka okuhlukile futhi lithanda izinsimbi kunami futhi cha, cha Uyisitabane, pho ukube wayeyiso? Haha, Iqiniso liwukuthi lapha ngikushiya njengoba kunconyiwe ibhulashi lokuqondisa elimsize kakhulu ukuba abe nokubukeka okusha, futhi ngoba uthi kulula kakhulu ukulisebenzisa.
Ungakususa kanjani ukuqubuka ngemuva kokugcwala
Ungayenga kanjani umuntu wesifazane